YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 02
Quebec and Ontario join forces to push Ottawa to take action on trade, environment
June 02, 2008 05:13
QUEBEC - Canada's two biggest provinces exercised their economic and political clout Monday as they signedaseries of agreements geared at pressuring Ottawa to move aggressively on international trade and the environment.The Liberal premiers of Quebec and Ontario wrapped up their first joint cabinet session by pledging to work together to cut greenhouse gases.
"We've gotalot in common and it's time for us to recognize that," Ontario Dalton McGuinty told reporters. "It's called Central Canada and it's time for us to assert ourselves again."
Issues where Quebec and Ontario disagree - such as equalization payments andacommon securities regulator - were conspicuously absent from the agenda.
Instead the two premiers repeatedly referred the size of their collective economies and historical ties stretching back to before Confederation.
Their renegade attitude towards federal priorities was on full display as McGuinty and Charest announced their desire to form an inter provincial carbon trading system - news of which sent Ottawa into defensive mode once again on Monday.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/02/20080အကြံပြုခြင်း
Q: My wife and I just had our first child. My wife plans to return to work soon. However, we are wondering if this will be possible due to the high costs of daycare. We have many relatives outside Canada who have volunteered to come here and help us baby-sit for some time. They haven’t taken any babysitting courses. However, they do have experience in raising children of their own. My wife and I would feel more comfortable with them thanastranger. Is there any way to do this other than just coming withavisitor’s visa? Is there any temporary work permit for family members willing to help us raising our son?
A: Congratulations on becominganew dad!
The real issue here is whether or not your relative will be engaging in “work” while they are in Canada. If so they will probably needawork permit to do so.
Someone is considered to be performing “work” when wages or commission is earned, or when they compete directly with activities of Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market.
If you plan on paying your relative, they will needawork permit. If you don’t pay them, they will be considered to be “working” if they are competing with Canadians or permanent residents. The immigration department’s policy manual says “unremunerated help byafriend or family member duringavisit, such asamother assistingadaughter with childcare” is not an activity which takes away from job opportunities in Canada. However, it is unclear if that were to apply if the help were to become more than an incidental part of your relative’s visit to Canada. If your relative provides full-time help, they might then be considered to be in competition with someone here who might want that job.
Since your relatives have not completedacourse in childcare, and don’t seem to have live-in caregiver experience, they would not qualify for our Live-In Caregiver Program (LCP). However, they could still apply forawork permit outside of the program, provided that you are able to obtainapositive Labour Market Opinion from HRSDC. If they go this route, the completion of two years of employment in Canada would not entitle your relative to apply for permanent residence in Canada as it would for participants in the LCP.
Unfortunately, our laws do not clearly facilitate the entry of those people who we trust the most with our children.
Spousal Sponsorship Values are un-Canadian
You would think that “true love” would be enough for Canada’s immigration department to conclude thatamarriage is genuine.
Officers have little guidance from our Immigration Regulations as to what isa“genuine” relationship and so Citizenship and Immigration Canada (CIC) publishes its policies and instructions to its officers in its immigration manual.
Canadian citizens and permanent residents who marry foreigners should be aware of what immigration officers are looking for when they are assessing the genuineness ofamarriage or common law partnership for sponsorship purposes.
CIC’s somewhat dated policy manual expects Canadian citizens and permanent residents who marry foreigners to marry inamanner that “conform(s) to the beliefs and cultures of the participants” in order for the department to consider the union genuine.
Furthermore, the same policy manual expects marriages that are solemnized abroad to be consistent with the “cultural norms” of the foreign country in order to supportafavourable decision.
These expectations createanumber of different problems.
If, for example, arranged marriages are the cultural norm inaparticular country,aCanadian immigration officer reviewing suchacase may negatively view the marriage of two people who meet and fall in love in that country.
Similarly, in certain countries societal norms strongly dictate thataperson should marry someone of similar economic, religious, educational, or cultural backgrounds. While these values have lost ground in Canada, our immigration department still uses these outdated values asameasuring stick to assess the genuine nature ofarelationship involvingaCanadian citizen or permanent resident.
Canadians who enter such marriages without complying with these foreign societal values may find themselves celebrating their wedding without the presence of key relatives and friends who would normally be on hand. The department’s policy manual suggests that officers consider the wedding itself, where it was celebrated, and who attended it in determining the genuineness of the relationship. Again, if this is not consistent with what the department feels is normal the sponsorship can be refused.
In Canada, the “cultural norm” is that we can marry any adult of our choosing without any legal consequence. Canadians who marry abroad are expected to conform to alien values or risk being separated from their spouse foralengthy period of time or permanently.
The guidance given by CIC to its officers is archaic and should not require Canadian citizens and permanent residents to marry inamanner that complies with any standards other than our own.
Canadians who find themselves in these circumstances should not lie about how they met, or how they were married and who attended the nuptials. Where the relationship is genuine, it is always easier to overcomearefusal on appeal than it is to explainalie that was intended to makeacouple look more “normal”.
Loss of numbers is couple’s $27M gain
Doug and Liz Kinsman show their Lotto Super7jackpot cheque for $27 million, the 10th largest payout in the game’s history.
Every Friday night for 10 years, Liz and Doug Kinsman played the same Super7numbers — until they lost those numbers last year.
That was the first of two lucky days for the Etobicoke couple.
The second was this past Friday, when they won $27 million onaQuick Pick.
“We feel fantastic ... We’re kind of numb still,” said Doug Kinsman, as they picked up their cheque at the Ontario Lottery and Gaming Corporation office yesterday.
“It’s the magnitude. A million or $2 million is one thing, but $27 million ... It hasn’t sunk in yet.”
Think you speak English? Try this test.Find the grammatical (or syntactic) error in this sentence: The standard of living has increased.Stumped? Soon, that will count against you if you’re hoping to immigrate to Canada. The rigorous language test that will bearequirement is vital to be fair and efficient with the influx of newcomers or vastly discriminatory and fatally flawed, depending on whom you talk to.
The grammar questions are among the trickiest in the International English Language Testing System exam, broken into 30 minutes of listening, 15 of speaking and an hour each of reading and writing. Created at Cambridge University in England, IELTS scores from one (“essentially has no ability beyondafew isolated words”) to nine (“appropriate, accurate and fluent”) withasix (“generally effective despite some inaccuracies”) the most common pass.
The cost and the “one-size-fits-all” test alarms immigration lawyers. InaMay 20 letter to Citizenship and Immigration Canada, the Canadian Bar Association calls the time, money and academic rigour of the testaturnoff for people who are fluent in English and French and too hard for bricklayers and plumbers.
(WFP ကပေးပို့သော ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် သယ်ယူနေစဉ်။မေ ၉၊ ၂၀၀၈။)ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကနေမြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ပေးအပ်နေတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေဟာ ဇူလိုင်လလယ်လောက်မှာ ပြတ်လပ်တော့မှာမို့ ဆန်အပါအင်စားကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်ပကနေ တင်သွင်းခွင့် တောင်းခံထားရပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ကူညီကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်ဖက်ယန္တရားတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုခွင့်ပြုဖို့ မလေးရှား ဒုတိယ
၀န်ကြီးချုပ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို
စုစည်းပြီး ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
WFP အနေနဲ့ လိုအပ်တာကတော့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် တကမ္ဘာလုံးကနေ စီးဝင်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ WFP ရဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
မစ္စ ဂျိုဆက်တ် ရှီးရန် (Ms. Josette Sheeran) က ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ထဲက ပထမဆုံးသော ကုလ သမဂ္ဂအေဂျင်စီတခုရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်မှုတွေတော့ ရှိနေပြီ၊ ဒါပေ
မယ့် အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ရမှာတွေဟာ သေရေးရှင်ရေး နောက်ဆုံးအခြေအနေ
မှာ ရောက်နေပါပြီလို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
WFP အနေနဲ့ လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေဟာ ဇူလိုင်လလယ်
လောက်မှာ ပြတ်လပ်တော့မှာမို့ ဆန်အပါအ၀င် စားနပ်ရိက္ခာတွေကို ပြည်ပကနေ
တင်သွင်းခွင့်ရဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဆီမှာ တောင်းခံထားရတယ်လို့ WFP ရဲ့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ဒေသဆိုင်ရာရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပေါလ် ရစ္စလေ
(Paul Risley) က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို
စားရေရိက္ခာတွေ ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် ဆန်နဲ့ တခြားစားကုန်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
မှာပဲ ကျနော်တို့ ၀ယ်ယူနေပါတယ်။ ဇူလိုင်လလယ်လောက်ရောက်ရင်တော့ ဒီ ဆန်နဲ့ တခြားစားကုန်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပကနေ တင်သွင်းဖို့ လိုလာမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီလို စားကုန်တွေကို တင်သွင်းခွင့်ရဖို့ မြန်မာအစိုးရဆီမှာ
ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံထားပါတယ်။ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို စားနပ်ရိက္ခာ
ထောက်ပံ့နေတာတွေ ပြတ်တောက်သွားစေမယ့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှ ကျနော်တို့ မကြုံချင်ပါဘူး။” လို့ ပေါလ် ရစ္စလေက ပြောပါတယ်။
အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စရှီးရန်ဟာ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး၊ ကုလ
သမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး၊ အာဆီယံအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးစီနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သုံးပါတီ အခြေခံအလုပ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်သူနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆွေးနွေးရာမှာ နိုင်ငံတကာက ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေ မြစ်ဝ
ကျွန်းပေါ်ဒေသ သွားရောက်ခွင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေစေတဲ့ ဗျူရိုကရေစီ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်း အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ မစ္စရှီးရန်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ခရီးသွားဖို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံရမယ့်ကာလကို အရင် သီတင်းနှစ်ပတ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာကနေ နှစ်ရက်ကို လျှော့ချပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုတခါ သုံးရက်ထိ ထပ်တိုးလိုက်ပြန်ပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို သွားရောက်ခွင့်ဟာ ခုချိန်ထိ အခက်အခဲဖြစ်နေရသေးကြောင်း
ပေါလ် ရစ္စလေကလည်း ပြောပါတယ်။
“မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ဆိုင်ကလုံးဒဏ်သင့်လူထုဆီကို WFP ကနေ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်စွမ်းမှာ ခရီးသွားခွင့်ဟာ အရေးပါတဲ့ အတားအဆီးတခုအဖြစ်
ရှိနေဆဲပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်းတွေဟာ ခရီးသွားလာခွင့်ရဖို့အတွက်
လိုအပ်ချက်တွေ၊ ခွင့်ပြုချက်ရဖို့တွေနဲ့ ဆက်ပြီး တားဆီးကန့်သတ်ခံနေရဆဲပါ။ အခု
ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်း ၂၆ ယောက်ကျော် ရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဝန်ထမ်းတွေကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဆီ စေလွှတ်ဖို့ရာမှာ အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြု
ချက်ရဖို့ ဆက်ပြီးတော့ အရမ်းကို ခက်ခဲနေဆဲပါ။” လို့ ပြောပါတယ်။
WFP အနေနဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅၇၅,၀၀၀ တို့အတွက် ပထမအကျော့ ဆန်တွေ ဖြန့်ဖြူး ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် မရသေးတဲ့လူတွေက အများကြီးကျန်နေသေးပြီး ဒုတိယအကျော့
တောင်မှ ထပ်ဝေရတော့မှာပါ။ အခုတကြိမ်မှာတော့ အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ဒုက္ခသည် ၆၆၃,၀၀၀ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဦးတည်ချက်ထားထားတယ်လို့ WFP ကဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထု ၂၀၀,၀၀၀ တို့အတွက်
တယောက်ကို တရက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဆင့် ၅၀ နှုန်းနဲ့ သီတင်းလေးပတ်တိုင်
ထောက်ပံ့နေတဲ့ စီမံကိန်းအသစ်တခုကိုလည်း WFP က စတင်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဈေးတွေပြန်ဖွင့် ရောင်းဝယ်နေပြီမို့ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ သူတို့
လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ၊ မုန်တိုင်းအတွင်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ဝယ်နိုင်
ဖို့အတွက် သိပ်မများတဲ့ ဒီငွေကို ထောက်ပံ့နေတာပါလို့ ပေါလ် ရစ္စလေက ပြောပါ
လက်ရှိမှာ WFP ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တစီးဟာ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး
အသုံးပြုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ပေါလ် ရစ္စလေက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
နောက်ထပ် ရဟတ်ယာဉ်ကိုးစင်းဟာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာ
နိုင်ငံဆီပျံသန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ရက်အတော်ကြာကြာအတွင်းမှာ ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံဆီသွားနိုင်ဖို့ ပေါလ် ရစ္စလေက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူ
ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ခွင့်ပြုဖို့ မလေးရှား
ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် ဒါတွတ်ခ် ဆယ်ရီ နာဂျစ်ဘ် (Datuk Seri Najib) က မြန်မာအစိုးရ
ကို ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပမာဏဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်
ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီ ငလျင်ရေလှိုင်းဒဏ် ပမာဏထက်ကို ကြီးတာမို့ လူတွေ ဘေးဒုက္ခ
ကျရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အာဆီယံရဲ့စစ်ဖက်
ကို ပိုကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကုန်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတခုအတွင်း မလေးရှား ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်က ပန်ကြားခဲ့တာဖြစ်
ပါတယ်။ အဲဒီညီလာခံကို မြန်မာ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် မလေးရှား ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့
ဘာမှ အကြောင်းပြန်ကြား ပြောဆိုခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ အဲဒီအစား သူတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေ
နဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထု ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကို အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့
အတွက် ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကို အစားအစာ၊ ရေနဲ့ ဆေးဝါးတွေ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး
ပြီမို့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အရှိန်မြှင့်နိုင်
တော့မယ်လို့ သူယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ် ဂိတ်တ်စ် (Robert Gates)
ကတော့ ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လျစ်လျူပြုမှုဟာ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်
လောက်တဲ့ထိ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြစ်ရှိနေတယ်လို့ အဲဒီညီလာခံမှာပဲ အပြင်းထန်ဆုံး
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ မုန်တိုင်းလွန် လုပ်ရပ်များ ရာဇ၀တ်မှု မြောက်သော လျစ်လျူပြုမှုဟု အမေရိကန် ဝေဖန်
မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီ ပေးမှုတွေအပေါ် ကန့်သတ်ထားချက်တွေကို ရုတ်သိမ်း မပေးဘူးဆိုရင် လူတွေ အများကြီး ထပ်မံ သေဆုံးနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Gatesက ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ မစ္စတာဂိတ်ရဲ့ အာရှ ခရီးစဉ်အတွင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာရှဒေသ လုံခြုံရေး အစည်းအဝေးမှာ အခုလို ပြောဆို လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ဗျူရို က ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Luis Ramirez သတင်းပေးပို့ထား တာကို ဒေါ်ညိုညိုလွင်က တင်ပြထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့လက တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း လေမုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် လူပေါင်း တသိန်း သုံးသောင်း လေးထောင်ကျော် သေကြေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ ရတယ်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂက ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အတွက် အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အစည်းအဝေးရဲ့ ဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ်တွေမှာ မြန်မာ နိုင်ငံအရေးကတော့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတာပါ။
မြန်မာ စစ်အစိုးအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေကို လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ် ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ သူတွေဆီ အကူအညီတွေ ရောက်ဖို့က တားမြစ် ပိတ်ပင်မှုတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Gates ကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလိုသာ ဆက်လုပ် နေရင် လူတွေအများကြီး ထပ်မံ သေဆုံးရလိမ့်မယ်လို့ ဝေဖန် ကောက်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပြည်သူပြည်သားတွေ ဒုက္ခရောက် သေဆုံးနေရတာကို လျစ်လျူ ပြုနေတာဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ကျွန်နေ သလို ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာစစ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ မူဝါဒဟာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု မြောက်တဲ့ လျစ်လျူပြုမှု မူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သောက်ရေသန့်၊ ဆေးဝါးနဲ့ ရဟတ်ယဉ်တွေ တင်ဆောင်ထားတဲ့ အမေရိကန် စစ်သေင်္ဘော လေးစီးဟာ မြန်မာကမ်းလွန် အန်ဒမန်ပြင်လယ်ပြင်မှာ အဆင်သင့် ရပ်ဆိုင်းထားပြီး အမေရိကန်ဘက်က အကူအညီ တွေပေးဘို့ ကမ်းလှမ်းထားချက်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ခွင့်ပြုခဲ့ရင် မုန်တိုင်း ဒစ်ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ခံခဲ့ရတဲ့ နေရာဒေသတွေအထိ ရဟတ်ယဉ်တွေနဲ့သွားရောက်ကူညီဘို့ အသင့်ရှိနေတာပါ၊
ဒီကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဘို့အတွက်ကတော့ ခုထိ မဆုံးဖြတ်ရ သေးဘူးလို့ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုလိုက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆုံးဖြတ်ဘို့ရှိပါတယ် လို့လဲ ဆိုပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတော့ သူတို့ ကမ်းလှမ်းချက် အပေါ် လက်မခံတာကတော့ ရှင်းနေပါ တယ်လို့လည်း ၀န်ကြီး ဂိတ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊
ဒီလိုပြောဆိုမှုကြားထဲကပဲ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေဟာ ရာနဲ့ထောင်နဲ့ ချီနေတဲ့ လေဘေး ဒုက္ခ သည်တွေဆီ ရောက်ရှိနေပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာစစ်အစိုးရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ ကယ်ဆယ် ရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြီးဆုံးသွားလို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ဘို့ အာရုံစူး စိုက်နေ ပါပြီလို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ဒုတိယကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး အေးမြင့်က အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးမှာပဲ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊
မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းတထောင့် တရာကျော် ကုန်ကျမယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်မှာကြောင့် ဒီလောက် ငွေကြေးကုန်ကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာ တခုကိုမှတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရက တင်ပြပြောဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် လေ့လာသုံးသပ်သူ ပညာရှင်တွေကတော့ နိုင်ငံတကာက ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အဲ့ဒီနေရာတွေကို သွားရောက်ခွင့် မပြုသေးသရွေ့ ခန့်မှန်းထုတ်ဖေါ် ပြောဆို ဘို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
အကန့်အသတ်များက ကယ်ဆယ်ရေးတွင် အဟန့်အတားဖြစ်နေဟု စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ပြော
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 02 2008 22:43 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ ဝေးလံသော ဒေသများသို့ အကူအညီ ပစ္စည်းများ သယ်ပို့ပေးရေး အတွက် သူတို့၏ ရဟတ်ယာဉ် တစီးကို အသုံးပြုခွင့်ရရန် မြန်မာအစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက် မရသေးဟု ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်ဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) က ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
“ကျနော်တို့ ရဟတ်ယာဉ်တစီး အခု ရန်ကုန်မှာ ပစ္စည်းတွေ သယ်ဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ခုအချိန်အထိ သုံးလို့ မရသေးဘူးဗျာ” ဟု ဘန်ကောက် (WFP) ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပေါလ်ရစ်စလေ Paul Risley က ပြောကြား သွားပါသည်။ “ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီရဟတ်ယာဉ်က သုံးဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ” ဟု သူက ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲကြောင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသရှိ ဝေးလံသော ကျေးရွာ အများအပြားသို့ ပစ္စည်းများ သယ်ပို့ပေးရန် ရဟတ်ယဉ်များ အသုံးပြုခွင့် ရရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု ရစ်စလေက ပြောဆိုပါသည်။
“ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း နောက်ထပ် ကျနော်တို့ ရဟတ်ယာဉ် ၉ စီး အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘန်ကောက်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ယူလာဘို့ အသင့် ဖြစ်နေမှာပါ” ဟု ရစ်စလေက ပြောဆိုပါသည်။
WFP သည် ယခုအထိ ခန့်မှန်းခြေ ဆိုင်ကလုံး လေဘေးဒုက္ခသည် ၅၇၅ဝဝဝ ဦးထံသို့ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် အစိုးရ၏ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများ၏ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးရသည်ဟု ဆိုလိုက်ပါသည်။ ယခု လောလောဆယ် အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် နေနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသမှာ နေပြီး အလုပ် လုပ်နေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ ခွင့်ပြုချက်က မရသေးဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် တကယ့် စိန်ခေါ်မှုတရပ်ပါဘဲ” ဟု ရစ်စလေ က ပြောဆိုသွားပါသည်။
ဤအတောအတွင်း မြန်မာအစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက် မရရှိသဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်လုံးလုံး ပင်လယ်ပြင်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း အမြောက်အမြား၊ ရဟတ်ယာဉ် အများအပြား တင်ဆောင်ကာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည့် မိမိတို့၏ ရေတပ် သင်္ဘော ၄ စီးကို ပြန်လည်ထွက်ခွါရန် အမိန့်ပေးတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဌာန အရာရှိများက ပြောဆိုသွားပါသည်။
“စစ်အစိုးရက ကျနော်တို့ကို ကူညီခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ အတော်ကို ရှင်းလင်းနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ ခုအချိန်အထိတော့ ဘာမှ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ သင်္ဘောတွေ အဲဒီနေရာမှာ ပတ်ချာလည် လှည့်ပြီး စောင့်နေရတာ အတော်ကို ကြာနေပါပြီ” ဟု အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ်ဂိတ် Robert M. Gates က စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် အာရှလုံခြုံရေး ကွန်ဖရင့်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောဆိုသွားပါသည်။
ယခင်အပတ်ကလည်း အလားတူ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ကာ မြန်မာ့ရေပိုင်နက် အပြင်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည့် ပြင်သစ် ရေတပ်သင်္ဘော 'Mistral' ကလည်း စစ်အစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက် မရသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကာ မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများကို ချထားပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆိုင်ကလုံးဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဒေသများသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည့် WFP အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျိုးဆက်ရှီးရန်း (Josette Sheeran) က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ ချထားရေးကို နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေသည့် ကြိုးနီစနစ်များ လျှော့ချပေးပါရန် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းသွားသည်။
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ စေလွှတ်ရေးအတွက် အစိုးရက ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မြဲဖြစ်နေပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှအပြန် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်၌ သူမက ပြောဆိုသွားပါသည်။
လူပေါင်း ၆၆၃ဝဝဝ ဦးကို ပထမအသုတ် ဆန်ရိက္ခာများ ပေးအပ်နိုင်ရန် ရည်မှန်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ယခုအထိ လူပေါင်း ၅၇၅ဝဝဝ ဦးကို အဆိုပါဆန်များ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု (WFP) က ပြောပါသည်။ ဒါပေမဲ့ လူအတော်များများ အဲဒီ ရိက္ခာကို မရသေးဘူးဟုလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုသွားပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များကို ဒုတိယအသုတ် ဆန်များဝေရန် အချိန်ရောက်နေပြီဟု ဆိုသည်။
မြို့များပေါ်ရှိ ဆိုင်ကလုံး လေဘေး ဒုက္ခသည်များထံ အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ကျေးရွာ အများအပြားထံ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ မရောက်သေးဘဲ ကျန်နေသေးသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်မှ ပြန်လာခဲ့သူ ရန်ကုန်မြို့မှ အကူအညီပေးရေး လုပ်သားတဦးက ပြောသွားပါသည်။
လေဒဏ်သင့် ကျောင်းပျက်များကြောင့် ကျောင်းသား တသန်းကျော် ပညာရေးထိခိုက်ရ
သောကြာနေ့၊ မေလ 30 2008 21:35 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒေသများတွင် ကျောင်းများ ပျက်စီးကြသဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ ကျောင်းသားလူငယ် ဦးရေမှာ ၁ ဒဿမ ၁ သန်း ရှိသည်ဟု အစိုးရ ကိန်းဂဏန်းများက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပျက်စီးသွားသော အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၄၁၀၆ ကျောင်း ရှိသည့်အနက် လုံးဝ ပျက်စီးသွားသော ကျောင်း ၁၂၅၅ ရှိကာ၊ ၈၀၄ ကျောင်းမှာ ဆိုးဝါးစွာ ပျက်စီးသွားသလို၊ ၁၉၉၆ ကျောင်းမှာမူ အမိုးများ ပျက်သွားသဖြင့် ကျောင်းသားများ ယခုလို ပညာသင်ကြားရေး ထိခိုက်ကြရသည်။
"ကျနော်တို့ မြို့ပေါ်မှာက အထက ကျောင်း ၂ ကျောင်းကပဲ အမိုးလန်သွားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါတော့ လူကြီးတွေ လာကြည့်တော့ ပြင်ပြီးသွားပြီ။ တခြား မူလတန်း ကျောင်းလေးတွေဆိုရင် ကျောင်းဆောင်တခုလုံး ပြိုသွားတာ ရှိတယ်။ အနီးအနားက ရွာတွေဆိုရင် ဘာမှကို မကျန်တော့တာတွေ ရှိတယ်" ဟု ဘိုကလေး မြို့ခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း ကျောင်းဖွင့်ရာသီကို ရောက်တော့မည် ဖြစ်သော်လည်း မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသများမှ ပျက်စီးသွားသော ကျောင်းအများစုတို့မှာ ယနေ့ထိတိုင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ကျောင်းသားမိဘများ အနေနှင့်လည်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးကိုသာ လုံးပန်းနေရ၍ ကလေးများ၏ ကျောင်းတက်ရန် ကိစ္စကို မတွေးဝံ့အောင် ရှိနေကြသည်။
"ကျမကလေးတွေကို ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်စေချင်လို့ ကြိုးစားပြီး ကျောင်းထားခဲ့တယ်။ အခုက ကျောင်းကလည်း ပျက်နေပြီ။ ကျမတို့ အိမ်လည်း မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ကလေးတွေကို ကျောင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။ ကလေးတွေက ကျောင်းတက်ချင်ကြတယ်" ဟု ဘိုကလေးမ ကျောင်းသားမိဘ တဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းသားငယ်များသည် ကျောင်းတက်ရန်ထက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ရှိနေကြသည်။
"သူများတွေက ကျောင်းအပ်နေရပြီလေ။ သမီးက မအပ်ရသေးဘူး။ စိတ်မကောင်းဘူး။ သမီးက ဒီနှစ် ၁၀ တန်းတက်မှာ၊ ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွဲ ယူထားတယ်။ အဖေတို့က မရှိတဲ့ ကြားက မြို့မှာ ကျောင်းထားပေးထားတော့ ကြိုးစားပါတယ်။ အခုကတော့ အိမ်တောင် မရှိတော့ဘူး။ ကျောင်းတက်ရဖို့ကတော့ သမီးရဲ့ ကံတရားလို့ပဲ မှတ်ပါတယ်" ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ်အပိုင် အတွဲနှစ်ရွာမှ မညိုညိုက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လေဘေးဒဏ်သင့် ၇ မြို့နယ်တွင် အခြေခံ ပညာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်ရက်ကို တလ နောက်ဆုတ်လိုက်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပညာရေးရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
"ဒီလို ထုတ်ပြန်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းက အရင် ကြေညာပြီးတဲ့ ဘေးဒဏ်သင့် ၇ မြို့နယ်ကိုပါ။ တလ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါတယ်" ဟု ပုသိမ်မြို့ တိုင်းပညာရေးရုံးမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းများ ဖွင့်ရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး၍ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ လေဘေးဒဏ်သင့် ငပုတော၊ ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာ၊ ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ၇ မြို့နယ်တို့အတွင်းမှ အခြေခံပညာ ကျောင်းဖွင့်ရက်များကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
တနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး ကျောင်းအပ်ရက်ကို မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် အခြား ပြည်နယ်-တိုင်းများမှ ကျောင်းများသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ဒုက္ခသည်အကူအညီ ဇူလိုင်လလယ်တွင် ပြတ်လပ်မည်ဟု ကုလ ပြောကြား
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 02 2008 17:24 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ပေးထားသော အကူအညီသည် ဇူလိုင်လလယ်တွင် ပြတ်လပ်သွားမည် ဖြစ်ရာ ရေရှည် အကူအညီများ လိုအပ်နေသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များက ရန်ကုန်တိုင်းရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသများသို့ သွားရောက်ခဲ့သူ ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီ၏ အကြီးအကဲက သူတို့အဖွဲ့သည် ယခုအချိန်အထိ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးရွားဆုံး ခံခဲ့ရသော ဒေသတွင် လူပေါင်း ၅၇၅ဝဝဝ ကို ရိက္ခာများ ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သော်လည်း အများစုမှာ ရိက္ခာ အထောက်အပံ့ မရကြသေးသလို ဇူလိုင် လလယ်နောက်ပိုင်း ရေရှည်အတွက် ဆက်လက် လိုအပ်ချက် ရှိနေသည်ဟု ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် အကြီးအကဲ Josette Sheeran က “နိုင်ငံတကာက ရေရှည် အကူအညီတွေရဖို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ဆိုရင် ဇူလိုင်လလယ်မှာ အားလုံး ပြတ်လပ် ကုန်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
ကုလ အေဂျင်စီသည် မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဆုံးခဲ့ရသော ဒေသတွင် ဒုက္ခသည် ၆၆၃ဝဝဝ ကို အထောက်အပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဒေသများတွင် လူပေါင်း ၂ သန်းခွဲသည် အစားအစာ၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် သောက်သုံးရေ အရေးတကြီး လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် အကူအညီ မရကြသေးဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရုံးက ခန့်မှန်းထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် အကြီးအကဲသည် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအတွက် အသစ်ဖွဲ့ထားသော သုံးပွင့်ဆိုင် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်သူနှင့် စနေနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် Josette Sheeran က အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များကို ဗီဇာထုတ်ပေးသည့် အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုခဲ့ပြီး အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးစေသော ဗျူရိုကရေစီ ယန္တယားများကို ရုပ်သိမ်းပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သေးသည်။
ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဒေသများမှ ဒုက္ခသည်များသည် ရိက္ခာရရှိရေးကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ် တောင်းဆိုနေသည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် ဝန်ထမ်းများက ပြောကြောင်း Josette Sheeran က ပြောသည်။
“တိုးတက်မှုတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အရေးတကြီး ကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကို မလှမ်းရသေးပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီး တလကျော်လာသည့်အထိ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ပေးရေးတွင် စစ်အစိုးရဘက်က အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ လက်ခံနေသည်။ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများဖြင့် မြန်မာ့ရေပိုင်နက် အနီးတွင် ၂ ပတ်ကျော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေသော အမေရိကန်မှ USS Essex အပါအဝင် စစ်သင်္ဘော ၃ စင်းသည် မကြာမီတွင် နောက်ကြောင်း လှည့်ပြန်တော့မည်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ်ဂိတ်စ် က စစ်အစိုးရဘက်က လက်ရှိပေါ်လစီကို အပြောင်းအလဲ မလုပ်လျှင် နောက်ထပ် လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးမည်ဟု ယမန်နေ့က သတိပေးသည်။
အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောများ၏ နောက်ကြောင်းပြန်မည့် အစီအစဉ်သည် ပြင်သစ်သင်္ဘော၏ နောက်ကြောင်းပြန် ခရီးနှင့် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်သဘောင်္သည် မြန်မာပြည်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် မရသဖြင့် ထိုင်းကမ်းခြေသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ရည်ရွယ်သော ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း တန်ချိန် တသောင်းကို ကုလ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ကြီးက မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇ဝ လိုအပ်လျက်ရှိရာ ယခုအချိန်အထိ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ပမာဏ၏ သုံးပုံတပုံသာ ရရှိ သေးသည်ဟု ဆိုသည်။
မေလ ၂-၃ ရက်နေ့များတွင် လူပေါင်း တသန်းကျော် အသေအပျောက် ရှိခဲ့သော မုန်တိုင်းအလွန် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကုလသမဂ္ဂက အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂ဝဝ တောင်းခံထားရာ ယခုအချိန်အထိ သန်း ၁၅ဝ ကျော်တန်ဖိုး ကတိကဝတ် ရရှိထားသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရက မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
မင်းဇင် | ဇွန် ၂၊ ၂၀၀၈
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ချိန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလည်း ချမ်းသာ မပေးခဲ့ပါ။ ရာနှင့်ချီသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလှသော အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သည်လည်း ရန်ကုန်မြို့၏ အဆိုးရွားဆုံး ထိခိုက်ပျက်စီးခံခဲ့ရသည့် နေရာတခု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပြင်းထန်လွန်းသည့် လေလှိုင်းများက သစ်ပင်ကြီးများကို အမြစ်ကျွတ်အောင် ချွတ်ယူခဲ့ပြီး ထောင်အခန်းများတွင် မိုးရေများ ဖြင့် ပြည့်လျှံလာခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်မီးများ ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီ။ မိုးရေစိုစွတ်၍ အေးချမ်းနေသည့် အကျဉ်းသားများစွာက စတင် ၍ အမှောင်ထဲတွင် ဆူပူ အော်ဟစ်ကြတော့သည်။
မုန်တိုင်းပြင်းထန်နေဆဲ၌ပင် ထောင်ဆူမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အစောင့်များက စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ ထောင်အခန်းတခုရှိ အကျဉ်းသားများက ထောင်ကို စတင်မီးရှို့လိုက်ကြရာ မီးခိုးများက တခြားအခန်းများသို့လည်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။
မျက်စိ ရောဂါခံစားနေရသည့် အထင်ရှာဆုံး အကျဉ်းသား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အဖို့လည်း မီးခိုးများ ကြောင့် အသက်ရှုကျပ်လာခဲ့ရသည်။ မျက်စိများကလည်း မီးတောက်လုမတတ် နာကျဉ်ခံစားလာရသည်။ အချို့သော သူ၏ ရဲဘော် အကျဉ်းသားများမှာ မီးခိုးငွေ့များကြောင့် မေ့မျောနေကြပြီ။
တချို့သော စာနာသနားကြသည့် ထောင်အစောင့်များက ထောင်အခန်း တံခါးကို ပိတ်ဆို့နေသည့် လဲကျနေသော သစ်ပင် များ၊ သစ်ကိုင်းများကို ဘေးဖယ်ပစ်ကြပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထောင်ဆေးရုံနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့၍သာ ကံကောင်း ထောက်မသည်ဟု ဆိုကြရမည်။
"ကိုမင်းကိုနိုင်ရော၊ အခန်းထဲက တခြားအကျဉ်းသားတွေရော အကယ်၍ အချိန်မီ လာမကယ်နိုင်ဘူးဆိုရင် မီးခိုးတွေနဲ့ သေသွားနိုင်တယ်"ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ကိုဘိုကြည်က ပြောသည်။ သူက ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) (AAPP)ကို ဦးဆောင်နေသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဤရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုအတွင်း အကျဉ်းသားများ မည်မျှသေဆုံးရသည်၊ ဒဏ်ရာ ရရှိသည်ဟူ၍ အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် (AAPP) အဖွဲ့က အကျဉ်းသားအနည်းဆုံး ၃၆ ဦး ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု ယုံကြည်ရ ကြောင်း ဆိုသည်။
ဆိုးဆိုးရွားရွား မုန်တိုင်းသင့်ခံခဲ့ရသောဒေသများရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များလည်း သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့ ကြားသိခဲ့ကြရပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး ဖြစ်သူ ကိုသီဟသက်ဇင်၏ မိသားစုဝင် ၉ ဦးအနက် ၈ ဦး မုန်တိုင်းအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ပြန်ပြောပြကြပါသည်။ သူ၏ မိဘများနှင့်အတူ အဘွားဖြစ်သူ၊ သားဖြစ်သူနှင့် မောင်နှမများ မုန်တိုင်းအတွင်း အသက်ဆုံးပါး ခဲ့ကြရပါသည်။ သူ၏ ဇနီးတဦးသာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရသော အခြေအနေသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပုံပြုဖော်ပြနိုင်သည့် လောက အငယ်စားကလေးဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။
လူပေါင်း ၁၃၄,၀၀၀ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးရပြီး အနည်းဆုံး လူတသန်းနီးပါးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်စေခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက်တွင် စစ်အစိုးရက ကပ်ဘေးဒုက္ခ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လျစ်လျူရှုထားမှု၊ ဖင့်လေး လုပ်ဆောင်နေမှုများကို ကမ္ဘာက မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး ဤသို့လူအများအပြား အသက်ဆုံးရှုံးစေရလောက်အောင် တာဝန်ရှိမှု အပေါ် "လူသားမျိုးနွယ် တရပ်လုံးအပေါ် ရာဇ၀တ်မှု" ကျူးလွန်နေပြီဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံအတွက် အရေးပါသည့် အချိန်တွင် မုန်တိုင်းက တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအရ အကျိုးဆက်များလည်း မလွှဲ မရှောင်သာ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို မည်သူမှ ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
"အခြေအနေတွေကတော့ အရင်အတိုင်း ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အခြေအနေကိုတော့ ပြန်မသွားတော့ဘူး"ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံး တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ပရစ်ဆီလာ ကလပ် (Priscilla Clapp) က ပြောပါသည်။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ၏ စာနာမှုအပေါ် အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေစဉ်၌ပင် ၎င်း၏ "စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံ" ကိုလည်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မည်သို့မှ သက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း ပြသရန် လုပ်ဆောင်နေသည်။
"သူတို့က ဆန္ဒခံယူပွဲကို အတင်းဇွတ်တိုးဆက်လုပ်ပြီး အောင်မြင်တယ် ကြေညာလိုက်တာဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခုခံတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ လုပ်တာပဲ၊ သူတို့က ဒီ (ဖွဲ့စည်းပုံ)ကိစ္စကို ချက်ချင်းမလုပ်ရင် မုန်တိုင်းကြောင့် ကိစ္စတခုလုံး လမ်းကြောင်း လွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားတော့ လုပ်တာပေါ့"ဟု မစ္စ ကလပ်က ဆိုပါသည်။
မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာပင် ယခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်က ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ ကြသည် ဟု စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
"ဆိုင်ကလုန်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လမ်းပြမြေပုံ လုပ်ငန်းစဉ် တခုလုံးဆိုတာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆီလျော် စပ်အပ်မှု မရှိ တော့ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်"ဟု လူသိများသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုမိုးသီးဇွန်က ပြောပါသည်။
"အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အခု နာဂစ်မုန်တိုင်းက စာမေးပွဲစစ်လိုက်တာပဲ၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် စစ်တပ်က ဘယ်လောက် သစ္စာ ဆက်ရှိမလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်လိုက်တာပဲ၊ စစ်တပ်အတွင်း အကွဲအပြဲတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်"ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
တချို့သော လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆန္ဒစွဲအရဖြစ်စေ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြရာတွင် စစ်အစိုးရ၏ မုန်တိုင်းအပေါ် တုံ့ပြန်မှု၊ ညံ့ဖျင်းလွဲချော်မှုများသည် သူတို့ စစ်အစိုးရကို ချိနဲ့အားလျော့စေမည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြသည်။ သေချာသည်မှာ "သံဃာများ၏ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု ကြီး" ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းပြီးချိန် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ စစ်အစိုးရအပေါ် လူထုထောက်ခံမှု သိသိ သာသာ ကျဆင်းလာနေခဲ့ပါသည်။
"ကျနော်တို့ ကြားသိရသလောက် စစ်တပ်ထဲမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှု သိသိသာသာရှိနေတယ်" ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်မှ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဒေးဗစ် စတိန်းဘာ့ဂ် (David Steinberg) က ဆိုသည်။ " ဒါပေမယ့် အခုလိုတင်းမာမှုတွေက စစ်တပ် ကွဲစေလောက်အောင် ဖြစ် မဖြစ်၊ ဘယ်လိုအဆင့်မျိုးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတယ် ဆိုတာတော့ ကျနော် အသေအချာ မသိဘူး။ အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေလောက်အောင် အထက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာလား မသေချာဘူး။ သို့သော်လည်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်ကပဲ စတင်ဖြစ်လာရမှာပဲ"ဟု သူက သုံးသပ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း စစ်တပ်အရေး လေ့လာသုံးသပ်နေကြသူများက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို ခြိမ်းခြောက်စိန်ခေါ်မည့်သူများ ၎င်း အနီး လက်အောက်ရှိ စစ်တပ်အရာရှိများတွင် ရှိမနေဟု ဆိုကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ သေဆုံးပြီးမှသာလျှင် အပြောင်း အလဲ ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည်ဟု သူတို့က ဆိုကြသည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အများစုကမူ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ဖော်ဆောင် လျှင် ဖြစ်နိုင်သေးသည်ဟု ယူဆနေကြပါသည်။ အကယ်၍ လူထုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ခြစားပြိုယွင်းနေသည့် စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်မှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့လျှင် စစ်တပ်အတွင်း အကွဲအပြဲများက ပေါ်ထွက် ရှေ့တန်းရောက်လာမည်ဟု တွက်ဆ နေကြသည်။
"စစ်တပ်က လူထုဘက်ကို ရပ်တယ်၊ မရပ်ဘူးဆိုတာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်"ဟု ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဖိုးသံချောင်းက ပြောပါသည်။ " လူထုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုကြီးဆိုတာက စစ်တပ်အတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် တွန်းဆော်ပေးမယ့် ကိစ္စပဲ"ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
သို့သော်လည်း လူထုအုံကြွမှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊ မုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကြောင့်ဖြစ်စေ စစ်အစိုးရ အင်အားချိနဲ့ လာမည့် အနေအထားကို လူအများထင်သာမြင်သာ တွေ့ရမှု အနည်းငယ်မျှသာ ရှိပါသည်။ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ သန်း ၄,၀၀၀ ကိုင်၍ ရပ်တည်နေပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေမှ လစဉ် ဒေါ်လာငွေ သန်း ၁၅၀ ကျော် ရရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာသူများက ဤငွေများကို လူသားချင်းစာနာမှုကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများအဖြစ် ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်စေ သုံးစွဲရန်အလားအလာမရှိဟု ဆိုကြပါသည်။ စစ်အစိုးရက မုန်တိုင်းပြီးပြီးချင်း ဒေါ်လာငွေ ၄. ၅ သန်း ချပေးခဲ့သော်လည်း ဤငွေအများစုမှာ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံပံ့ပိုးနေကြသူများထံမှ လာသည့် အလှူငွေများသာ ဖြစ်ပါသည်။
တခြားတဘက်တွင် ပြန်ကြည့်ပါကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိနဲ့နေနှင့်ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုအရ ဖြစ်စေ၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ဖြစ်စေ အားပျော့ချိနဲ့နေကြပါသည်။ စီးပွားရေးအရလည်း ကာလကြာရှည် ဆက်လက်၍ ထိခိုက်နစ်နာနေရဦးမည့် အလားအလာ ရှိနေပါသည်။
သို့သော်လည်း ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် မုန်တိုင်း၏ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင်မူ သာမန်ပြည်သူအများစုက တတ်အားသရွေ့ အကူ အညီအထောက်အပံ့များ ပေးနေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤအကူအညီများဖြင့် ပြန်၍ ထူထောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု တွက်ဆ ထား၍ မရပါ။ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သည့် ရေရှည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ အမှန်လိုအပ်နေပါသည်။ ကုလ သမဂ္ဂ ဌာနများ၏ တွက်ချက်မှုအရ နိုင်ငံ၏ နေရာတချို့တွင် ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြ ပါသည်။
လူထုက စစ်အစိုးရအပေါ် စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ကြသော်လည်း သူတို့၏ အကြောက်တရားက ဒေါသထက်ပို၍ လွှမ်းမိုးထားပုံ ရပါသည်။ အကယ်၍ ယခုလတ်တလောကာလတွင် လူထုအုံကြွဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း အချိန်တို ဆန္ဒပြပွဲ များနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ကြုံတွေ့ရကာ နိဂုံးချုပ်ရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
ထိုမျှမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင် ခံထားရသမျှ အတိုက်အခံအင်အားစုများ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း ဆက်လက်၍ ကန့်သတ်ခံထားရဖွယ်၊ ဘေးရောက်နေဖွယ် ရှိပါသည်။ ယခုမုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကြားထဲမှ လူထုခေါင်းဆောင်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာပါကလည်း တနည်းအားကိုးဖွယ် ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါ က အားမရှိလှပါ။
လူထုကြားထဲမှ ခေါင်းဆောင်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာရန် ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ ရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း လက်ငင်းနိုင်ငံရေး ကိစ္စများအပေါ် သြဇာသက်ရောက်နိုင်လိမ့်ဦးမည် မဟုတ်ပါ။ ပိုအရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ယခုလိုပေါ်ထွက်လာသည့် ခေါင်းဆောင်သစ်များအပေါ် စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ် ခြိမ်းခြောက်ပြီး အညွန့်ခြွေ အကင်းသတ်လိုက်နိုင်ပါသေးသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ကုလသမဂ္ဂကလည်း ၎င်း၏ပြဌာန်းထားချက်ဖြစ်သည့် "ကာကွယ်မှုပေးရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှု" (Responsibility to Protect) မူအတိုင်း အရေးယူမှု မရှိကြောင်း ထင်ရှားပြသခဲ့ပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ဆက်လက်တိုက်တွန်း အားပေး ထောက်ခံနေကြမည် ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ဓာတ် ရေးရာအရ၊ စကားလုံးများအရ ထောက်ခံအားပေးမှုများသာ ဆက်လက်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် အလားအလာ မမြင်ရသလောက် ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်းကူညီမှု၊ ဖိအားပေး လာမှုကိုသာ အဓိကမျှော်လင့် အားကိုးနေကြပါသည်။
ဤအချိန်တွင် စစ်အစိုးရက စုပြုံကျဆင်းလာမည့် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများကို ထီပေါက်သည့် သဖွယ် မြင်နေပါလိမ့်မည်။ အထောက်အပံ့များ ဆက်လက် စီးဆင်းစေရုံလောက်သာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများ ခွင့်ပြုထား၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ငွေများကို စိတ်ကူးယဉ် စောင့်စားနေနိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူများနှင့်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ ကံကြမ္မာမှာမူ ဆိုးရွားဒုက္ခရောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းထန်လာမည့် အစပျိုးလက္ခဏာများ မတွေ့မြင်ကြရသေးသော်လည်း လေထန် လှိုင်းကြီးနေသည်ကိုတော့ သိမြင်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခိုလှုံနိုင်စရာ လုံခြုံသည့် ဆိပ်ကမ်းဟူ၍ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိပါလိမ့်မည်။
မုန်တိုင်းဘေး ကယ်ဆယ်ရေး စစ်အစိုးရ ကိုင်တွယ်ပုံဟာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုထက်ပိုဆိုး
နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေအပေါ် ကန့်သတ်မှုတွေ မြန်မာစစ်အစိုးရက မရုတ်မသိမ်းမချင်း မြန်မာနိုင်ငံ မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာ လူတွေဟာ ဆက်ပြီး သေကြေ ပျက်စီးကြလိမ့်မယ်လို့ စင်္ကာပူ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး ညီလာခံက ပြန်လာတဲ့ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးရဲ့ ပျံသန်းနေတဲ့ စစ်လေယာဉ်ပေါ်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ၀န်ကြီး ရောဘတ်ဂိတ်စ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် မျိုးနွယ်တုံး သတ်ဖြတ်တဲ့ အမှုကြီးမျိုးအတွက် အပြစ်ရှိပါသလားလို့ သတင်းထောက်တွေက မေးတဲ့အခါ မျိုးနွယ်တုံး သတ်ဖြတ်မှုထက် ပိုတဲ့ လူတွေ သေချင်သလောက်သေပါစေလို့ ပိုင်းဖြတ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကြီးနဲ့ ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ ကျွန်တော်က ပိုပြီး ထင်တယ်လို့ ၀န်ကြီး ဂိတ်စ်က ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့သာ သွားရောက်ကူညီနိုင်တဲ့ ဒေသကို သွားရောက်ခွင့် မရတဲ့အတွက် မြန်မာ့ရေပြင်အနီးမှာ အသင့်စောင့်နေတဲ့ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောကြီး USS Essex အပါအ၀င် စစ်သင်္ဘော သုံးစင်းကို လှည့်ပြန်ဖို့ မကြာခင်မှာ သူ့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်း ၀န်ကြီး ဂိတ်စ်က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်များရဲ့ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုက်မူလန်းပြောဆိုတဲ့ အခါမှာတော့ စစ်သဘောင်္တွေ လှည့်ပြန် ရတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တောင်မှ သင်္ဘောတွေဟာ မြန်မာ့ ရေပြင်အနီးကနေ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ ပြန်ပြီးထွက်ခွာမယ်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ စိတ်ထားနှလုံးသားတွေ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရင် အမြန်ဆုံး မြန်မာ့ ရေပြင်ထဲ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
One month after Myanmar cyclone, fewer than half of survivors getting relief
More thanamillion cyclone survivors in Myanmar are still without basic reliefamonth after the deadly disaster, humanitarian groups said Monday, as the intransigence of the country's junta continues to stymie outsiders' efforts to help.
While students returning to school offered signs of hope, aid groups said they still faced government delays in sending disaster experts and vital equipment into the country.
The hurdles have resulted in onlyatrickle of the necessary aid reaching the storm's estimated 2.4 million survivors, and left the relief efforts unable to move beyond providing the most immediate needs.
"People need basic relief, which is shocking after four weeks," said Sarah Ireland, the regional director of Oxfam,aU.K.-based humanitarian agency that is still trying to gain permission to work in Myanmar.
"If we were inanormal response by week four, those affected should be working toward recovery," she said. "They would be inaposition perhaps to think about what they need to restart their lives. But we know people on the ground don't have food to eat."
Soon after Cyclone Nargis hit Myanmar on May 2-3, it was clear the disaster would be one of the largest to hit Asia since the 2004 tsunami and would requireamassive relief effort.
Packing winds upward of 120-mph (193-kilometer) winds, the cyclone struck the low-lying delta as the impoverished fishermen and farmers slept.
Tidal surges as high as 12-foot (3 1/2-meter) reached some 25 miles (40 kilometers) inland, laying waste to entire villages and leaving 78,000 people dead and another 56,000 missing, according to the government's count.
"We are not yet at the stage where we are getting sufficient quantities of relief assistance to all those who need it," said Richard Horsey,aspokesman for the U.N. humanitarian effort. "Obviously, that has been very frustrating."
Aid groups are still unable to reach even half of the survivors with sufficient food and clean water, while trying to preventasecond wave of deaths due to malnutrition and disease.
A big obstacle in providing relief has been reaching the delta. With only seven government helicopters flying, relief supplies are mostly being transported along dirt roads and then by boat. Boats able to navigate the debris-filled canals are also scarce and efforts to import trucks and other vehicles have been hampered by government red tape.
"For aid agencies it is very important that those affected receiveafull complement of appropriate aid," said James East,aspokesman for World Vision,amajor private aid agency which had operations in Myanmar even before the disaster. "To say thatacertain percentage of people have received aid means little because some survivors may have receivedatarpaulin but no food and vice versa."
"Clearly though, people are not getting enough and there are those living in the farther reaches of the Delta, away from roads and temporary shelters who have received very little," he said. "The challenge for agencies is to reach these out of the way communities with the aid that they need.
One small sign of progress was registered Monday: except in the areas most devastated by the cyclone, most schools opened as schedule at the end of the hot season vacation, that started in March.
In many cases, the school buildings were still missing windows and parts of their roofs blown off by the storm, but UNICEF and other educational experts agreed that getting children back to their studies as soon as possible was an important part of the healing process.
The junta's response was in stark contrast to that of Indonesia during the 2004 tsunami and Pakistan during the 2005 earthquake. Both countries opened the doors to hundred of international aid groups and set aside their suspicions to allow the Americans troops to ferry aid and help evacuate survivors from remote areas.
A month on, most survivors in those disasters had been fed and sheltered in either camps or tents. Field hospitals were up and running and concerns about disease had dissipated. Talk was turning to rebuilding homes and getting the economy up and running.
Myanmar's xenophobic military regime _ rivaling only that of North Korea _ left survivors to largely fend for themselves. It barred foreigners from the delta until last week and refused entry to U.S. and French naval vessels which have been off the country's coast, laden with aid.
The French have already left and the Americans are preparing to follow suit.
"We have reached out, frankly, to Myanmar multiple times during this crisis in very direct ways," U.S. Defense Secretary Robert Gates said Sunday. "It's not been us that have been deaf and dumb in response to the pleas of the international community, but the government of Myanmar. We have reached out, they have kept their hands in their pockets."
Compounding the logistics challenges has beenashortage of foreign experts in the field. It has resulted inachaotic and uneven aid effort, with charity groups complaining it has nearly impossible to asses needs of survivors or set up systems that are normally in place by now to provide clean water and sanitation.
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies is still waiting for government approval to send six foreign experts into the field to help run its water treatment facilities. Until now, it has been able to provide only 5,000 people each day with clean water _ compared to 90,000aday during the tsunami in Aceh.
"It was much easier to get medical supplies, clean water, engineers and psychological consultants into the field in Aceh within the first month," IFRC Spokesman France Hurtubise said. "Human resources and expertise remainachallenge in Myanmar."
"In Aceh there were literally hundreds of NGOs and hundreds of international staff," said World Vision's East. "In Myanmar, there are far, far fewer. The reliance on local staff, volunteers and partners will be critical for the response in Myanmar."
"One should not underestimate how resourceful, through their day to day experience, the people of Myanmar are."
Children in classrooms without roofs as schools reopen in Myanmar's cyclone zone
2008-06-03 02:03:45 As students filed into Middle School No. 1 on Monday for the first day of classes since Cyclone Nargis hit Myanmaramonth ago, all eyes stared skyward _ at the gaping hole in the roof.The school in Thuwana,asouthern suburb of Myanmar's biggest city, Yangon, was one of 4,100 that were damaged or destroyed by the May 2-3 cyclone, according to the U.N. Children's Fund, UNICEF.The government delayed the June2start of the new term for several schools in the harder-hit Irrawaddy delta, where entire villages were wiped off the map.
But around Yangon most schools welcomed students back from their long hot season vacation, which started in March, despite the concerns of some teachers, parents and international aid groups about safety risks to students.
At Middle School No. 1,afew remaining strips of rusted corrugated iron roofing hung precariously overhead. The storm's gale-force winds shattered several of the school's windows and punched holes in its flimsy walls, and according to one teacher, actually knocked the school building off its foundations, meaning it will eventually have to be rebuilt.
"I am worried about the rain. If the rains get inside the school, the kids will get sick," said San Aye, the mother ofa12-year-old student.
But the 47-year-old mother said she supported the decision to restart school because she thought any delay would hurt the students academically.
She's probably not alone in her opinion.
"Parents traditionally placeahigh value on education in Myanmar. The estimated national primary school net enrollment rate is 82 percent for both boys and girls," says the U.N. Children's Fund, UNICEF.
But Khin Yir,ateacher from the northern Yangon suburb of Hlaing Thar Yar, said she felt it wasa"bad choice" to reopen schools so soon.
The storm's 120 mph (190 kph) winds ripped the roofs off two of the three school buildings at her junior high and driving rains flooded the interior, she said, asking that the school not be named for fear of government reprisals against her for talking toareporter.
So many schools needed repair that the roofs could not all be fixed in time for the resumption of class.
"After Nargis, we teachers tried to salvage what we could, but the rain damaged everything," said Khin Yir, dressed in the standard school uniform ofawhite shirt and forest-green longyi, the traditional sarong worn by men and women in Myanmar.
"We teachers hand-dried as many books as we could, and it'sagood thing we did because we have to use them now," she said. "We haven't gotten any new supplies."
Khin Yir said she feared for her students' safety and was concerned about how to help them cope with the trauma that many of them lived through. More than 100 teachers died in the storm; aid agencies say it is still unclear how many of the 78,000 known fatalities were children.
"Safety First" appeared to be the new slogan at Primary School No. 20, where the words were printed on white paper and posted on the walls of the school in the northeastern Yangon suburb of Dagon.
A gleaming new iron roof topped the one-story schoolhouse, which also opened for classes Monday _ to the dismay of some parents who said they could not afford school uniforms or books.
"Sending my daughter to school isaburden to me," said Khin Myo, as she dropped her 6-year-old off at Primary School No. 20. The mother said the storm damaged the family's home and destroyed the small shop where she used to makealiving selling onions and chilies.
"I still haven't been able to put my life back together," she said. "I would have preferred if school reopenedamonth later."
It costs about 25,000 kyat (US$25; €16) in expenses for textbooks and uniforms forastudent for each academic year, the equivalent of almost three week's work for laborers in this impoverished country.
At Middle School No. 1, justalittle less than half of the 385 enrolled student turned up Monday. A teacher, preferring to remain anonymous, speculated it was because their parents couldn't afford school supplies or transportation.
Tom Miller, chief executive officer for the U.K. charity Plan, said his group's experience was that returning to school "isavital part of the recovery process."
"If properly organized, schools can offerastrong foundation for the entire community's recovery," he said.
"But reopening schools before they are ready can do children more harm than good. What should be safe spaces for children become unsafe spaces if pupils are rushed back into damaged buildings with staff who are ill-equipped to help," he said.
With the region's infrastructure inashambles and huge demand for basic construction materials, it was unlikely that destroyed schools in the delta will be immediately rebuilt, said UNICEF's representative in Myanmar, Ramesh Shrestha.
The government has arranged for some schools that withstood the storm to run morning and evening sessions to accommodate students whose schools were destroyed, several teachers said.
BANGKOK — In the strongest remarks yet byahigh-ranking American official, Defense Secretary Robert M. Gates said on Sunday that Myanmar was guilty of “criminal neglect” for blocking large-scale international aid to cyclone victims, and that more Burmese civilians would perish unless the military regime reversed its policy.But despite the rising anger and frustration with Myanmar’s military leaders, Mr. Gates said that defense ministers meeting in Singapore over the weekend had unanimously opposed any plan to violate Burmese sovereignty and forcibly provide relief supplies.
Asaresult, he said, it was probablyamatter of days before the Pentagon withdrew four Navy ships carrying supplies that have been “steaming in circles” for days in the waters off Myanmar’s coast, waiting in vain for permission to ferry their cargo to areas hit by the storm.
“It’s becoming pretty clear that the regime there is not going to let us help,” Mr. Gates told reporters in Singapore before he headed to Bangkok on the third leg ofaweeklong trip to Asia. “I’d say that unless the regime changes its approach, changes its policy, more people will die.”
Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff, who joined Mr. Gates at the meeting with aboutadozen reporters, said that the government of Myanmar had already given permission for 95 American C-130 cargo planes to land in Yangon, the country’s main city, but that much more could be brought in from the Navy vessels. The relief flights have ferried in more than 1.5 million pounds of supplies, mostly food, water, mosquito netting and plastic sheeting for shelters.
At least 135,000 people are dead or missing sinceacyclone struck Myanmar on May 3, in the world’s biggest natural disaster since the Asian tsunami in 2004.
“Even though aid is beginning to flow,” Mr. Gates said, “so many parts of the Irrawaddy Delta are cut off from any kind of transportation that it’s really going to require helicopters to get assistance to them.”
The United States Navy vessels, led by the amphibious assault ship Essex, have on boardatotal of 22 helicopters, medical equipment, relief supplies, water purification systems and Navy and Marine Corps personnel — all offered to the government of Myanmar to assist cyclone victims.
At the meeting of defense ministers, Myanmar’s military junta defended its response to the cyclone, saying that it had promptly provided relief to all storm victims and that it expected the country to quickly recover, The Associated Press reported.
“Due to the prompt work” of the military government, food, water and medicine were provided to all victims, said Maj. Gen. Aye Myint, the deputy defense minister, adding, “I believe the resettlement and rehabilitation process will be speedy.”
Mr. Gates, normally understated and unflappable under the most pointed questioning, flashed anger on Saturday at the regional security conference when asked about American efforts to deliver aid to the cyclone victims. He noted that the United States had tried at least 15 times in the past month to get Myanmar’s leaders to allow more international aid into the country to no avail, and he called the government “deaf and dumb” for obstructing relief efforts.
“We have really exercised our moral obligation above and beyond the call,” he told reporters on Sunday in Singapore.
Mr. Gates said that ataprivate luncheon on Saturday for defense officials from two dozen countries, mostly in Asia, minister after minister voiced unhappiness with Myanmar’s restrictions on aid, making it an uncomfortable meal for Myanmar’s deputy defense minister.
In contrast, Mr. Gates said that the chief delegate from China, Lt. Gen. Ma Xiaotian, had described the importance of international support in dealing with the May 12 earthquake in Sichuan Province of China that killed more than 68,000 people, and had expressed China’s appreciation for the international community’s response.
Mr. Gates said that the ministers drew the line at using force to distribute aid in Myanmar. “There is great sensitivity all over the world to violatingacountry’s sovereignty,” he said, “particularly in the absence of some kind of U.N. umbrella that would authorize it.”
When asked whether that reluctance might beaconsequence of the United States’ decision to invade Iraq in 2003, Mr. Gates said there was no connection.
Inawide-ranging discussion with reporters in Singapore, Mr. Gates addressed several other issues, including responding to statements that General Ma of China made on Saturday objecting to the United States’ missile defense system, which the general called harmful to regional stability.
“It’s hard to seealimited capability such as we have and will have in the future undermining the offensive capability of either Russia or China,” Mr. Gates said. The United States would havearelatively small number of interceptors to use againstastrike using scores, if not hundreds, of long-range missiles, he said.
Mr. Gates was also dismissive of General Ma’s assertion that China’s development of new, long-range missiles was for defensive purposes. “It’s hard to see an intercontinental ballistic missile asadefensive weapon,” he said.
In Bangkok, aides to Mr. Gates said that the secretary had made clear inameeting on Sunday afternoon with the Thai prime minister andadozen top Thai military officers that the Bush administration would frown on any attempt by the military to seize power in Thailand.
A week of antigovernment protests in Bangkok have stirred fears that the military might stage another coup, two years afterasimilar street campaign against the prime minister at the time, Thaksin Shinawatra, led to his removal. Thai military commanders have denied reports that the army was plotting another takeover.
“Our position is pretty consistent,” Mr. Gates said in Singapore. “We want to see democratically elected governments, and we will convey that.”
Most of the meeting between Mr. Gates and the current prime minister, Samak Sundaravej, focused on the stunted relief efforts in Myanmar, senior defense officials said. Mr. Samak voiced his own frustration with the Myanmar government, aides to Mr. Gates said, and he gave the secretaryadetailed historical analysis of the junta.
BANGKOK — One month afterapowerful cyclone struck Myanmar and 10 days after the ruling junta’s leader promised full access to the hardest-hit areas, relief agencies said Monday that they were still having difficulty reaching hundreds of thousands of survivors in urgent need of assistance.
Over the past week, they said, the door has opened slightly andanumber of foreign experts have been allowed to travel into the Irrawaddy Delta, which bore the brunt of the May3storm. A modest flow of food, medicine and other supplies has begun to enter the delta by truck and barge.
But the agencies said that travel permits for international experts are limited and irregular and that dozens of relief workers remained stranded in the main city, Yangon.
“Several have been able to make essentially day trips to work with our field staff there,” Paul Risley,aspokesman for the United Nations World Food Program, said Monday. “But access remainsacontinuing challenge.”
A spokesman for the United Nations disaster relief agency said Monday that as of two days before, 15 foreign experts representing UN agencies were in the delta.
Analysts of Myanmar said they feared that the junta was playingagame of hints, promises and deception that it has used successfully over the years to deflect criticism from abroad.
“In all these crises that the Burmese face, there always is the teaser to take the pressure off the government,” said Josef Silverstein, an expert on Myanmar at Rutgers University. “They seem like they are going to cooperate, and just as soon as comment dies down, anything that is going to be useful dies with it,” he said. “Look back at the ‘saffron revolution,’ when they made all kinds of promises about what they were going to do and nothing happened.”
He was referring toapeaceful uprising led by monks that was crushed in September. The junta’s promises includedadialogue with the democracy leader Aung San Suu Kyi, but it dropped the idea after international attention had moved on.
In Geneva, the outgoing United Nations high commissioner for human rights, Louise Arbour, said the world’s failure to pressure Myanmar more strongly on human rights issues made it easier for the junta to keep out cyclone relief. “The obstruction to the deployment of such assistance illustrates the invidious effects of long- standing international tolerance for human rights violations,” she said.
The United Nations estimates that 2.4 million people were severely affected by the cyclone and said last week that 1.4 million of those remained in desperate need of food, clean water, shelter and medical care. The government says that 134,000 people died or are missing.
International relief agencies have complained strenuously that the junta is barring foreign aid and foreign relief workers from the worst-affected areas and endangering survivors.
On May 28 in Yangon, the United Nations secretary general, Ban Ki-moon, said the junta’s leader, Senior Gen. Than Shwe, had promised free access to foreign aid workers. Two days later, atadonor conference in Yangon, foreign nations pledged about $150 million in aid but most said it was contingent on access by foreign relief workers.
Returning to New York, Mr. Ban said that the government “appears to be moving in the right direction” and that “I hope, and I believe, that this marksanew spirit of cooperation between Myanmar and the international community.”
But relief workers said the spirit of cooperation was missing. Aftera10-day delay, the junta allowed the first of 10 World Food Program helicopters to carry supplies from Yangon into the delta. The other nine were in Thailand en route to Myanmar, Mr. Risley said. He also said that barges and smaller craft were delivering supplies to hard-hit areas.
The government has allowed American aircraft to land with relief materials but has barred American workers from leaving Yangon Airport to deliver them. It has turned away American, French and British naval vessels loaded with supplies.
The junta insists the emergency phase of the disaster has passed. Some news accounts from Myanmar have said the junta has begun forcing survivors from shelters back into the devastated countryside.
According to Human Rights Watch, thousands of displaced people have been evicted from schools, monasteries and public buildings.
”The forced evictions are part of government efforts to demonstrate that the emergency relief period is over and that the affected population is capable of rebuilding their lives without foreign assistance,” the agency said Saturday.
Anupama Rao Singh, regional director of the UN Children’s Fund, warned afteravisit to the Irrawaddy Delta that any resettlement would be premature, even if it was voluntary.
The government also said it would reopen schools with the start of the new term this week, though many school buildings were destroyed and many teachers were swept to their deaths. Unicef said that more than 4,000 schools serving 1.1 million children were damaged or totally destroyed by the storm and more than 100 teachers were killed.
“I think the generals are doing what they do best, taking charge of everything, trying to keep themselves in complete control,” said Aung Naing Oo,aBurmese political analyst who lives in Thailand.
Quebec and Ontario join forces to push Ottawa to t...
One month after Myanmar cyclone, fewer than half o...
Children in classrooms without roofs as schools re...